Qofkii ugu horeeyey ee corona virus qabeen arko...W/Q Khadar Casod
Monday March 23, 2020 - 16:51:10 in Articles by G. Good
17 bishi maalin arbacaa ayaan waxaan ka mid ahaa passengerkii raacay flightkii u danbeeyey ee diyaarada FLY DUBIA ee hargeisa to dubia
Flightkaasi wuxuu ahaa flightkii u horeeyeen arko kuraasta diyaarado buuxa intaan hargeisa ka safrayey Saf dheer ka dib finalygii waxaaan kornaynay diyaarada.
Sidii caadiga ahayd waxaa bilaabmay safarkaygii axlamdulilaah diyaaradii waxay Madaarka CIGAAL international airport nalaga kacday anagoo nabad qabnana waxay nala fadhiisatay madaarkii DUBIA international airport.
Diyaaradii markay nala fadhiistay waxaanu raacnay buseskii counterada gudaha Madaarka dadka gaynayey, Buseskii baa nala dhaqaaqay sidii caadiga ahayd anagoo niyada ku hayna inay inaanu toos Madaarka u galno.
Mudo markay socdeen baa jihoo kale oon xagii counterada naloo leexiyey Meel dhaxoo runwayga dhexdiisa mudo ha nala joojiyo buskana albaabku waa noo xidhan yahay cid wax wara cusub noo sheegta ma hayno Dadkii ilaahay yaab u keen War siday wax u socdaan?
Passengerkii ninba rayigiisa meel u kac qaar yidhaa maanta bishi waa 17 march waa maalintii flight la xidhayo waa la ina celinayaa Meelaha 30 minute ka dib baa naloo yimid oo naloo sheegay in shaybaadh nalaga qaadayo ka dib aanu gudaha magalada galayno Saf dheer ka dib waxaanu gaadhnay shaybaadhkii Qofkasta form baa laga buuxbuuxiyey Meeshu ku dagayey, numberka laga helayo hadii shaybaadhkiisa wax laga helo Ka dib shaybaadh casri baanu marnay qori dheer oo bush yar afka ku leh baa Sanka nalaga galiyey quruurad yaroo biyo ku jiraa baa qorigii lagu riday qoruradana nin walba passport numberkiisi baa lagu qoray, Allxamdulaah sidii baanu magalada ku galnay isagoo qof walba ku ducaysanayo ilaahow yaan waxba nalaga helin Howshuba halkaneey ka bilaabmaysaaye
2 cisho markaan magalada joogay baan maqlay jawaabihii baa soo baxay diyaaradina nin somali ah baa xanuunkii laga helay oo idinla socday oo ninkii Dawlada qaado waa la karintimeeyey Naxdin weynaa Baadidoon ka dib ninkii wuxuu noqday nin aan garanayo shirkadaheena waaweyn xawaalada ka shaqeeya oo dubia degan Hadaba su,aasha ugu weyni ninkaani dadkeeni dalkii yey isgaadhen Horta ninkani flight aanu raacnay buu marka horaba habeenimadii soo raaco diyaaradii uun buu dib ula noqday oo madaarkaba muu dhaafin oo lacag taalay madaarka oo shirkada u shaqeeya lahayd buu soo doonay Oo 2saac buuba gabigaba madaarkeena joogay hadaba su.aalaha iswaydiin mudan
1-Mudadii uu madaarka joogay yey kulmeen?
2-yey isa salaameen?
3-isagoo cidi ku dhowdahay ma hindhisay
4- qoladeenan caafimaadkee madaarku siday u ogaan waayeen xumada ninkaas?
5- rakaabkii ay dubia ka wada yimaadeeni siduu ula soo macaamilay?
Ilaahay ha ina badbaadiyo